စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ခရီးသည်များ မန္တလေးမြို့သို့ လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ရိုက် ဆင်းသက်နိုင်ရန် ဆေ - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ခရီးသည်များ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မန္တလေးမြို့သို့ လေယာဉ် ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း Singapore Tourism Board(STB) နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ှSingapore Tourism Board(STB) အနေဖြင့် လေးညအိပ် ငါးရက်ခရီးစဉ်ကို အထူးအခွင့်အရေးတစ်ရပ်အနေဖြင့် medical tour များအား စင်ကာပူရှိဆေးရုံနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ medical checkup ပြုလုပ်ပေးခြင်းကို ပထမဦးဆုံးစီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နိုင်မည့် ခရီးစဉ်များကိုလည်း ရေးဆွဲပေးသွားရန် သဘောတူညီထားသည်။
”အပြန်အလှန်အနေနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကနေ မန္တလေးအပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်နိုင်မယ်ဆိုရင် မန္တလေး ရဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ မင်းကွန်းနဲ့ပုဂံ၊ စစ်ကိုင်းတို့လို ခရီးစဉ် တွေအတွက် လေးညအိပ်ငါးရက် ခရီးစဉ်တွေကို ရေးဆွဲပေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာက နှုတ်အားဖြင့်သာ သ ဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်လို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့သတ်မှတ်မူ ဘောင်များအတိုင်း ညှိနှိုင်းပြီးသွားရင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အစပိုင်း လောက်မှာမှ ခရီးစဉ်တွေကို လက် တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ ပိုမိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွေကို ရေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် လေ ကြောင်းလိုင်းတွေအတွက်ရော၊ နှစ်နိုင်ငံအတွက်ပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ Passenger တွေရရှိတဲ့ အတွက် ခရီးသွားကဏ္ဍကို အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစန်းယုက ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့ ကမ်းနားလမ်းရှိ Ayarwaddy River View Hotel ၌ အချိန်နှစ်နာရီကြာပြုလုပ်ခဲ့ သော ဆွေးနွေးပွဲသို့ STB ဘက် မှ STB Assistant Director Ms. Eileen Lee,Chan Gi Airport Group Assistant Manager Mr. Tan Chun Wui, Singapore Airlines rS General manager Mr. Desmond Pan နှင့် Senior passenger sale officer တို့ပါဝင်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစန်းယု၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းနိုင်၊ UMTA (MDL) မှ ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးရည်၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အောင်မြင့်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ-စင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံခရီးသွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Silk Airline မှ အထူးသင့် တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် လေကြောင်း ခရီးစဉ်များကို အပြန်အလှန်ပြေးဆွဲပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော အခြေအနေ တွေ့ရှိချက်များကို လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က နိုင်ငံတော် သမ္မ??
တတိယမြောက် ရင်သွေး ရရှိတော့မယ့် မင်းသား ဒိန်းဂျွန်ဆင်
အလုပ်သမားနေ့ အခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့၌ကျင်းပ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ၂ဝ ခန့် လမ်းလျှောက် ချီတက်၍ အ?
သြဂုတ်လ ကျိန်စာဆိုးကို အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့၍ ဟယ်ရီကိန်း ကျေနပ်
မန္တလေးမြို့ ရွှေနန်းတော်ကျောင်း ပြုပြင်မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း ရန်ပုံငွေ ထပ်မံ လိုအ??
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် အခြား အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ လာရောက်မည်ဖြစ်၍ ရန်ကုန်မြို့နယ် အချို??